> Resource > Samsung > 2 Siyaabaha la isu saar Music on Samsung Galaxy I7500
Sidee baad u wareejiyo music in I7500? Waxaan leeyahay waa in ay ku xirmaan PC via USB, rakibay Samsung New studio PC ... u aqoonsadaan I7500 sida disc saari ... oo aan ku daro faylasha qaar ka mid ah waxa ay u ... laakiinse ayan samaynin iyo folder wax ... Waxaan leeyahay lahaa oo kaliya DCIM iyo download fayl ... Markaas waxaan ka dhigi folder cusub '' music '' iyo meel oo dhan music gudaha. Hadda Ma aqaano sida loo ciyaaro files kuwii? Ayaan bilaabin 'music' 'app ka Samsung laakiin waxa aanu waxba ma furo!
Si aad ku dari music in I7500, waxaan u maleynayaa, waa in aad u xirmaan kombiyuutarka. Marka ay disk saari muujinaysaa ilaa, aad u kala qaad, oo jiita iyo hoos u files music, waxa uu. Just sameeyo wax la mid ah waxa user kor ku yaal aanu. Nasiib darro, files aad u tiro badan oo ku saabsan Galaxy Samsung ee I7500 aad ku guul dareysato laga yaabaa in la helo galka music midig. Inkasta oo aad ku najaxdo ku daray in ay heeso, aad u heli karaan in ay heesaha oo looma oggola in ay la ciyaari. Sidee u cabsi badan yahay! Taa ka sii daran, heesaha oo aad rabto in aad ku darto waxaa uun telefoonka kale / kiniin ah, sida iPhone. Haddii taasi kiiskaaga, waxaad yeelan kartaa dhibaato weyn ku sameeyo music kala iibsiga Ssamsung Galaxy I7500 ah.
Ha welwelin. Waxaa jira had iyo jeer hab waa. No arrinta haddii aad rabto in lagu daro music ka computer ama telefoon si Galaxy Samsung ee I7500, aad halkan ka heli kartaa talooyin ku dhawaaqa.
Qaybta 1. music kombiyuutar si ay Samsung Galaxy I7500
Qaybta 2. Add music in I7500 ka phone / kiniin
Si aad u dhigay music on Samsung Galaxy I7500, ee Wondershare MobileGo for Android (Win) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) yahay doorasho adiga kuu wanaagsan. Waxaa loo iyadoo tababare xirfad leh Android phone oo kiniin ah, MobileGo for Android Wondeshare ee kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo iyo dar music kasta oo aad Samsung Galaxy I7500 la qasabno yar. Haddii aad soo bixi oo iibsaday songs cadaalad-faraxa badan ee maktabadda Lugood, xitaa waxaad iyaga iyo sidoo dajiyaan karaa in taleefan this.
Tan iyo Windows iyo Mac version la mid ah oo u qabata, kaliya waxaan isku dayi version Windows in ay ku tusaan sida loo dar music in Samsung Galaxy I7500.
Fiiro gaar ah: xiriir WiFi ma laga heli karaa version Mac ah.
Tallaabada 1. Isku aad Samsung Galaxy I7500 wirelessly ama via cable USB
Orod tababaraha phone Android kombiyuutarka iyo xiriiriyaan Samsung Galaxy I7500 wirelessly ama deeruhu in cable USB ah. Ka dib markii la aqoonsan yahay, telefoonka muujinaysaa ilaa uu furmo.
Fiiro gaar ah: Download iyo rakibi file apk MobileGo aad Galaxy I7500 marka la isticmaalayo WiFi.
Tallaabada 2. Ku dar music in Galaxy I7500
1. Ku dar playlists Lugood in Galaxy I7500
In ka Tools aad jeceshahay waxaa laga yaabaa , riix badhanka la soo dhaafay, laakiin mid ka mid ah - Import Lugood Library . Sii Kaliya playlists sida aad doonayso inaad saxday. Riix OK si aynu kala iibsiga bilaabmin.
2. saar music ka computer si Galaxy I7500
Tag column ka tegey, oo guji Music . By gujinaya dar furmo suuqa music ah, oo aad ka heli 3 doorasho: Ku dar File , dar Folder iyo Import Lugood playlist . Dooro mid ka mid ah ay ku riday music on I7500.
3. Download music in Galaxy I7500
Tababaraha phone Android waxay ku siinayaan ah Wontube xarunta MP3 Download. Waxaa Click iyo hoos si aad u hesho heeso aad jeceshahay iyo download. Markaas, guji Downloads ee geeska hoose ee bidixda. Waxaa soo bilaabo, waxaad eegi kartaa habka of dajinta. Markaas, music ka soo bixi doona si toos ah loo soo wareejiyo I7500.
Haddii aad u ururiyaan websites music jecel yahay qaar ka mid ah, waxaad iyaga ku dari kartaa in daaqadii. Riix iskutallaabta. Marka wada hadal ka soo baxa, aad ku qor karaa URL website iyo magaca. Markaas, waxaad ka bixi kartaa bogga internetka ee music.
Qaybta 2. Ku dar music in I7500 ka phone / kiniin
Xaaladdan oo kale, waxaa loo baahan yahay qalab kala iibsiga telefoonka. The Wondeshare MobileTrans ay qaab dawlad-of-taagan tahay. Waxa aad siisaa awood ay uga darto music in Samsung I7500 telefoon kasta ama kiniin ku salaysan Android, Symbian ama macruufka.
Tallaabada 1. Connect Samsung Galaxy I7500 iyo qalab kale
Bareesada in fiilooyinka USB ah in ay ku xidhmaan qalabka ay u kombiyuutarka. Ka dib markii socda, Tababaraha kooxda tan telefoonka Android lagu ogaadaa oo muujinaysa ay hindiseen uu furmo suuqa.
Tallaabada 2. Ma kala iibsiga music ah
Haddii aad leedahay dukaan music on Samsung I7500 oo doonaya in ay mar dambe sii, oo aad ka saari karto oo dhan oo iyaga ka mid adigoo sax ku Clear Data hor nuqul.
Sii Kaliya music hubiyaa. Dabadeed, samee kala iibsiga adigoo gujinaya Start Copy .
Video waa ku saabsan sida loo dar music ka Lugood, computer ama qalab si Samsung I7500